Ukuluhlu lwababethayo: I-China isoyikisa 'abahluli' baseTaiwan
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » Ukuluhlu lwababethayo: I-China isoyikisa 'abahluli' baseTaiwan
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ummeli worhulumente waseTshayina, uZhu Fenglian, wathumela isoyikiso esidlangalaleni kubasekeli benkululeko baseTaiwan.
I-China isoyikisa amagosa aseTaiwan: Abo bangcatsha ilizwe labo kwaye bafune ukwahlula ilizwe bamiselwe ukuba nesiphelo esibi, kwaye baya kuthiywa ngabantu kwaye bagwetywe yimbali.
I-China isoyikisa 'ngohlwaya' abaxhasi kunye nabaxhasi benkululeko yaseTaiwan.
ITaiwan 'abahluli' baya kuthintelwa ukuba bangene kumhlaba omkhulu, eHong Kong naseMacao.
'Abahlukanisi' baya kuphandwa ukuba banetyala lolwaphulo-mthetho ngokuhambelana nomthetho waseTshayina wamaKomanisi.
Isithethi se-Ofisi yeMicimbi yaseTaiwan yaseTshayina yeBhunga likarhulumente, siphendula kumbuzo wemithombo yeendaba malunga namanyathelo ohlwaya ngokuchasene nabaxhasi Taiwan Inkululeko, ibhengezwe ukuba 'izinto ezahlulayo' zikuluhlu oludumileyo lwaseTshayina kwaye 'ziya kohlwaywa' 'ngokuvumelana nomthetho.'
Ummeli karhulumente waseTshayina, uZhu Fenglian, wathumela isoyikiso esidlangalaleni Taiwan abaxhasi bokuzimela, belumkisa ukuba abo bakuluhlu lokubethelwa, kunye nezalamane zabo, abayi kungena kwilizwe kunye nemimandla emibini yolawulo olukhethekileyo. Hong Kong kunye neMacao, kunye namaziko abo adibeneyo aya kuthintelwa ekwenzeni nayiphi na intsebenziswano nemibutho kunye nabantu ngabanye kwilizwe.
UZhu wongeze ukuba abaxhasi babo kunye namashishini anxulumene nawo aya kuvinjelwa ekubandakanyekeni kwimisebenzi yokwenza inzuzo kwilizwe, phakathi kwezinye izohlwayo.
"Abo bangcatsha ilizwe labo kwaye bafuna ukwahlula ilizwe baya kuba nesiphelo esibi, kwaye baya kugatywa ngabantu kwaye bagwetywe yimbali," utshilo uZhu, ebhekisa kubaxhasi belizwe. Taiwan's ukuzimela, kuquka inkulumbuso yaseTaiwan u-Su Tseng-chang, umongameli we-Legislative Yuan Yu Shyi-Kun kunye noMphathiswa weMicimbi yaNgaphandle yaseTaiwan uJoseph Wu.
Abo bakolu luhlu luza kubanjelwa uxanduva lobomi bonke kwaye baya kuphandwa ubutyala ngokuhambelana 'nomthetho waseTshayina' wamaKomanisi, wongeze watsho uZhu.